कुखुरालाई यौन शोषण गरि हत्या गरेको आरोपमा १४ वर्षीय युवक पक्राउ !
एजेन्सी, २१ औ सताब्दी जहाँ मानिसहरुलाई आफ्नो यौन इच्छाको अधिकार दिईएको छ । यौनजन्य कार्यमा बढी चाहाना राख्नेहरुको लागि यौन खेलौना समेतको आविष्कार भैसकेको छ । यौन कार्यकै लागि भनेर रेड लाईन क्षेत्र एस्
समेत छुट्टाइएको छ । यस्तो युगमा अझै पनि त्यस्ता व्यक्ति छन् जसले आफ्नो यौन इच्छाको लागि निर्दोष, असाहय जनावरहरुको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
यौन उत्तेजनाले मानिसलाई यतिसम्म निच बनाउदो रैछ भन्ने कुरा पाकिस्तानमा घटेको एक घटनाले सावित गरेको छ । पाकिस्तानको पन्जाब स्थित हफीजाबाद भन्ने शहरमा एक युवाले कुखुरामाथि यौन शोषण गरेर मारेको आरोपमा उनलाई गिरफ्तार गरिएको छ । स्थानीय पुलिसका अनुसार १४ वर्षको एक बालकले जलालपुर भट्टिया नजिक ११ नवेम्बरको दिन उक्त कार्य गरेका थिए । पाकिस्तानी मीडिया अनुसार कुखुराको मालिकले उक्त घटनाको बारेमा पुलिसमा उजुरी गरेका थिए । आरोपको आधारमा उक्त आरोपीलाई पुलिसले गिरफ्तार गरेका छन्। मालिक अनुसार आरोपीले आफ्नो घरबाट कुखुरा लगेर करणी गरी हत्या गरेको बयान दिएका छन् ।
प्रकाशित : सोमबार, माघ २९, २०७४११:२२
संसारकै पहिलो पेन्टिङ गर्ने महिला सुँगुर, लाखौमा बिक्छ यसको कला!
५८ मिनेट अगाडि PARWATI
५९ मिनेट अगाडि PARWATI
१ घण्टा अगाडि PARWATI
Protected: रेखा थापा चलचित्र हिरो देखि रियल हिरोसम्म (voice over content )
Protected: चामलको पानीको प्रयोगले छालामा हुने फाईदाहरु
Protected: कस्ता ब्लड ग्रुप भएकाले कस्तो चिया पिउने (voice over content )
Protected: दातको घिन लाग्दो पहेंलोपन हटाउने उपायहरु (for voice over )